समाचार | गृहपृष्ठ | Page 3
वैशाख १२, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधवार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथ... बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 349 views
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ५ सय रूपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ । आकार र रङ्ग पहिलाकै हुने तर दुईओटा बाघहरूको चित्रको सट्टामा एउटा मात्र पाटेबाघकोचित्र भएको उक्त... बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 724 views
वैशाख १२, वीरगञ्ज । नेपालको पूर्वी नाका विराटनगर पनि भारतीय रेल सञ्जालसँग जोडिएको छ । बुधवार भारतको कोलकाताबाट मालवाहक रेल विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय नाका जोगवनी वथनाहका लागि हिँडेको छ । अह... बिस्तृतमा
वैशाख १२, बुटवल । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आगामी शनिवार र आइतवार आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन र सोमवारको विशेष समारोहका लागि नेपाली सेनाले करीब रू. ४ करोडक... बिस्तृतमा
समाचार 304 views
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भवन निर्माणमा आवश्यक सिमेण्ट केडिया समूहको वृज सिमेण्टले दिने भएको छ । वर्षदिन अघि निर्माण शुरु भएको आविष्कार केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने स... बिस्तृतमा
समाचार 25 views
वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले निजी आवास पुनःनिर्माण वर्षात् अगाडि नै सम्पन्न गर्ने बताएको छ । बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रेडक्रसले आफ्नो जिम्माको ३ हजार २ स... बिस्तृतमा
वैशाख १२, कलैया । यस वर्ष बारामा करीब रू. दुई अर्ब मूल्य बराबरको गहुँ उत्पादन भएको छ । खाद्यान्न बालीमा दोस्रो स्थानमा रहेको गहुँबाली चालू आव ०७४/७५ मा बाराको कुल २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा... बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 86 views
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ५ दशमलव ८९ प्रतिशत कायम हुने बताएको छ । बजेट ल्याउँदा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने... बिस्तृतमा
प्रदेश समाचार, समाचार 36 views
वैशाख १२, सुर्खेत । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक विकासका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । बुधवार प्रेस सेण्टर कर्णाली प्रदेश... बिस्तृतमा
रोशनी भट्टराई वैशाख १२, विराटनगर । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि भन्दै चिनीको सन्दर्भ मूल्य सूची प्रति टन ४ सय ६० अमेरिकी डलर कायम गरेपछि विराटनगरका व्यवसायी आक्रोशित भएका... बिस्तृतमा